မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 09/01/2008 - 10/01/2008
ကျွန်မတို့မိသားစုက ခရီးထွက်တာ အရမ်းဝါသနာပါပါတယ်.. ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ခဏခဏခရီးထွက်ဖြစ်ပါတယ်.. အထူးသဖြင့်တော့ ကျိုက်ထီးရိုးကို စိတ်ပေါက်ရင်ပေါက်သလို ထထသွားတတ်ပါတယ်.. ကျိုက်ထီးရိုးကို ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ၁နှစ်မှာ အနည်းဆုံး ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်လောက်ရောက်ပါတယ်.. ၂ညအိပ်၃ရက်ခရီးကိုပြောတာပါ..
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျိုက်ထီးရိုးနဲ့ ခုကျိုက်ထီးရိုးနဲ့မတူပါဘူး.. တကယ်ကို တောနေတောသဘာဝလေးပါ.. ကားလမ်းလဲမရှိသေးတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး နားနားနေနေ အားလုံးလမ်းလျှောက်တတ်ကြရပါတယ်.. အဲလိုလမ်းလျှောက်တက်ရင်း ခရီးသွားချင်း ခင်ခင်မင်မင် စကြနောက်ကြတာလေးကလဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးတစ်ခုပါပဲ.. တစ်လမ်းလုံးလဲ ဒီလူတွေနဲ့ချည်းတွေ့နေရတာဆိုတော့ မိတ်ဆွေလိုတောင်ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်... ကျွန်မကလေးဘ၀တုန်းကဆိုရင်တော့.. ကလေးတွေကို ထမ်းတဲ့ ပလိုင်းလေးကိုစီးပြီးတက်ပါတယ်.. ပလိုင်းလေးကိုစီးပြီး အောက်ကနေ မေမေတို့ဖေဖေတို့ပစ်ပေးတဲ့ မုန့်တွေ ပလိုင်းထဲမှာအပြည့်နဲ့ပေါ့.. ပလိုင်းထမ်းပေးတဲ့ ဦးလေးကြီးတွေကလဲ တကယ်ကိုရိုးသားတဲ့ တောင်သားကြီးတွေပါ..
ဗိုက်စာရင် လမ်းကအကြော်ဆိုင်လေးတွေမှာ ဗူးသီးကြော်ဝင်စားရင်းနားလိုက်.. အုန်းစိမ်းရည်သောက်ရင်းလဲ ၀ါးရုံပင်လေးတွေကို လေတိုးတဲ့အသံ.. တောင်ကြားလေးတွေကနေဖြတ်တိုက်လာတဲ့ ချမ်းစိမ့်စိမ့်လေနုအေးနဲ့ တောတောင်သဘာဝတွေကို အပြည့်အ၀ခံစားလို့ရပါတယ်.. အကြော်မစားလဲ အမောပြေရေသောက်ပြီး နားလို့ရပါတယ်... မြို့ပြမှာမွန်းကြပ်ခဲ့သမျှအမောအပန်းတွေကို စားရိတ်စားခသိပ်မကုန်ပဲ ဘုရားလဲဖူးရင်းစိတ်ဖြေလျော့လို့ရလို့ ကျွန်မတို့မိသားစုရဲ့ အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်နေရာဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ...
ခရီးတ၀က်ကျိုးလို့ရှိရင်တော့ ရေမြှောင်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်.. ရေမြှောင်ကြီးမှာ စိမ့်စမ်းရေအေးအေးလေးနဲ့ချိုးရတဲ့ ရေချိုးဆိပ်ရှိပါတယ်.. စိမ့်စမ်းရေအေးလေးနဲ့ရေချိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ခရီးတ၀က်က အမောအပန်းတွေလုံးဝပြေလျော့ပြီး လန်းဆန်းသွားပါတယ်..ပြီးရင်ထမင်းဆိုင်တွေမှာ နားပြီးထမင်းစားကြ.. အရင်တုန်းက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသေးတုန်းက တောင်ခြေရောက်တာနောက်ကျတော့ တခါတလေ အေးဆေးတောင်တက်မယ်ဆိုရင် ရေမြှောင်ကြီးလောက်ရောက်ရင် မှောင်နေတတ်ပါပြီ.. အဲဒိအခါကျရင် ရေမြှောင်ကြီးမှာညအိပ်ရတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်.. တခါတလေမှပါ.. ကျွန်မတို့မိသားစုကတော့ ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ တောင်တက်နှေးတော့ အိပ်လေ့ရှိပါတယ်.. ရေမြှောင်ကြီးက တောင်ကျစမ်းရေရှိတော့ ရေချိုးရတာတောင်ပေါ်နဲ့ ယှဉ်ရင်တော်တော်လေးသက်သာပါတယ်.. တစ်ခါပေးပြီးရင် ရေအ၀ချိုးပါ.. တောင်ပေါ်မှာတော့ ရေပုံးတစ်ပုံးကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပုံးလိုက်ရောင်းတာပါ.. ရေနွေးဆိုဈေးတစ်မျိုးပါ.. ရေဈေးကြီးလို့ ချွေတာပြီးချိုးရပါတယ်..
ဈေးဆိုင်တွေကလဲ ခုလိုမဟုတ်ပဲ.. စည်စည်ကားကားရှိလှပါတယ်..
ရေမြှောင်ကြီးကို ဖြတ်ပြီးရင်တော့ လမ်းကသိပ်မကြမ်းတော့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ မတ်တော့ပိုမတ်လာပါတယ်.. ကင်ပွန်းစခန်းကတက်စ "ရွှေရင်ဆို့" စခန်းတို့ဘာတို့ဆို ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တော်တော်များပါတယ်.. ရေမြှောင်ကြီးကျော်သွားပြီးတော့ "စိုင်တမော့" စခန်း.. "ဖိုးပြန်တောင်".. "နဂါးပတ်"တောင်.. "မြေဖြူတောင်"စသည်ဖြင့် ပေါ့.. ပေးထားတဲ့တောင်နာမည်လေးတွေကလဲ အဲဒိတောင်တွေရဲ့သဘာဝနဲ့လိုက်ဖက်လှပါပေတယ်.. စိုင်တမော့ဆိုရင် မတ်လို့မော့တောင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ.. ဖိုးပြန်တောင်ဆိုရင်လှေကားတွေနဲ့ အတက်ချည်းပဲမို့.. အဖိုးကြီးတွေမတက်ပဲ ပြန်သွားတယ်ဆိုပြီး တင်စားထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်. နဂါးပတ်တောင်ဆိုရင် လူသွားလမ်းက တောင်ကြီးကို ပတ်ပြီး နဂါးပတ်ပုံစံဖောက်ထားလို့ပါ.. မြေဖြူတောင်ရောက်ရင်လဲ မြေကြီးရဲ့အရောင်ကတခြားတောင်တွေနဲ့မတူပဲ.. ကျောက်မှုန်လေးတွေရောပြီး ဖြူဖျော့ဖျော့လေးတွေပါ.. အဲဒိလိုမျိုးတောတောင်အလှကို ခံစားပြီးသွားရတာမှ တကယ်ကို ပိုက်ဆံကုန်ရကျိုးလဲနပ်.. စိတ်လဲအပန်းပြေ ဗဟုသုတလဲရတယ်လို့ထင်လို့ ကျွန်မကတော့ နှစ်သက်မိတာအမှန်ပဲ..
တောင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖြင့် အရင်ခေတ်က ကျောက်ပြားလေးတွေမှာ ရုပ်ကြွပုံလေးတွေနဲ့ နေပူခံကျောက်ပြားလေးတွေက တကယ်ကိုပဲလှပပြီး အပူအအေးသင့်တင့်တဲ့ အကောင်းစားကျောက်ပြားလေးတွေကို စတင်တွေ့ရပါပြီ.. ဘုရားကို ဦးတိုက်ရှိခိုးပြီးရင်တော့.. နေဖို့အတွက် ထမင်းဆိုင်တန်းကို ဆင်းရပါပြီ.. အရင်က ဟိုတယ်မရှိသေးပါဘူး.. တိဿဆောင်တို့ သီဟဆောင်တို့ကလဲ သိတဲ့အတိုင်း VIP မှရတာပါ.. ခုမှ တိဿဆောင်ကပိုက်ဆံပေးတည်းလို့ရတာပါ.. အရင်ကထမင်းဆိုင်တန်းမှာပဲလူတိုင်းတည်းကြပါတယ်.. အဲဒိမှာတည်းရင် ပိုက်ဆံမပေးရပါဘူး.. ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုင်မှာ ထမင်းစားရပါတယ်.. ဘုရားဆွမ်းတော်တို့ဘာတို့လဲ သူတို့ဆီကပဲဝယ်ကပ်ရပါတယ်.. မ၀ယ်မနေရတော့မဟုတ်ပေမဲ့..နားလည်မှုပေါ့..သူတို့ကကိုယ့်ကို အလကားအိပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာ ဒါရောင်းချင်တာကိုး.. တရားမျှတတယ်လို့ထင်ပါတယ်..
အရင်က ထမင်းဆိုင်လေးတွေက အခုလိုတိုက်အိမ်တွေမဟုတ်ပါဘူး.. ဓနိတွေ..ပျဉ်တွေ..၀ါးတွေနဲ့ဆောက်ထားတာပါ.. အိပ်ခန်းလေးတွေက ကျဉ်းပြီးတိုးဝှေ့အိပ်ရလို့ အပြစ်မတင်လိုက်နဲ့နော်.. ညညဆို တောင်ပေါ်မှာတိုက်တဲ့လေက အဲဒိ ၀ါးကြမ်းခင်းလေးကြားက တိုးဝင်လိုက်ရင်ဖြင့် ချမ်းကနဲစိမ့်ကနဲနဲ့ ဘေးကလူကို ပြေးကပ်ရတော့တာပါပဲ.. မိုးလင်းခါနီးလို့အာရုံဆွမ်းကပ်ချိန်ရောက်ရင်တော့ဖြင့်ကျွန်မတို့ကလေးတွေမနိုးခင်.. တခြားအခန်းတွေကလူတွေနိုးတော့ လမ်းလျှောက်သံစကားပြောသံ.. မနက်စာစားတဲ့အသံလေးတွေကို ကြားရပါပြီ.. အခန်းပြင်က ပျဉ်ခင်းပေါ်ကို နင်းလျှောက်သွားတဲ့ခြေသံတွေကြောင့် အိပ်မရတော့လို့ ထပြီးစောစောစီးစီးနိုးရတာကလဲ အရသာတစ်မျိုးကောင်းလှပါတယ်..
စားစရာဆိုလဲ ကားလမ်းမပေါက်သေးတော့ ရှိတာလေးကို တစ်ပွဲတစ်ပွဲနဲနဲပဲပေးပေမဲ့.. အရသာရှိရှိနဲ့ စေတနာပါပါတယ်..
တခြားတောင်တွေကို အလည်အပတ်သွားမယ်ဆိုရင်လဲ အလှူခံသိပ်မရှိပါဘူး.. ၁ခု၂ခုလောက်ပါပဲ.. မထည့်သွားလဲ ဘာမှမပြောပါဘူး... အဲဒိတုန်းက(လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀တုန်းက) ဘုရားကို ရွှေသင်္ကန်းကပ်.. ကြေးခေါင်းလောင်းလေးတွေလှူတုန်းက ဂေါပကကို အာလဘ သလဘပြောရင်း ...
ကျွန်မဖေဖေမေးခဲ့ဖူးပါတယ်.. "ဒီခေါင်းလောင်းလေးတွေအများကြီးကို လှူပြီးတော့များလာရင် ဂေါပကကဘာလုပ်မှာလဲ"လို့မေးတော့...
ဂေါပကက "ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားပြီးတော့.. အားလုံးစုပြီး.. မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးလိုလုပ်ပြီး.. ပြန်လှူပေးမယ်"
ခုတော့ ဘယ်တော့များ ကျိုက်ထီးရိုးပေါ်ကို ခေါင်းလောင်းကြီးရောက်လာမလဲလို့ သံသယ၀င်မိပါတယ်...
အဲဒိတုန်းက စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာဆိုလို့.. အိမ်သာတက်ရတာပဲရှိပါတယ်.. အဲဒါတော့ ညစ်ပတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်.. တောင်ပေါ်သူတောင်ပေါ်သားတွေက လောဘနည်းပြီး ဖော်ရွေကြပါတယ်..
ယနေ့ခေတ်ကျိုက်ထီးရိုးကို ခုလိုမြင်တော့ ဟိုးတုန်းကကျိုက်ထီးရိုးလေးကို အောက်မေ့မိပါတယ်.. တချို့တချို့နေရာတွေမှာ ပိုမို အဆင်ပြေလာပေမဲ့.. အများစု အထူးသဖြင့် လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေက ဆိုးလာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်.. (ဒါကကျွန်မအမြင်ပါ)..
ကားလမ်းဖောက်လိုက်လို့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ အမောမခံနိုင်သူတွေ အချိန်မရှိသူတွေ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကအစ ဘုရားကို လွယ်လွယ်ကူကူလာဖူးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့.. ကျိုက်ထီးရိုးပသာဓ တောလမ်းလေးကတော့ ခြောက်ကပ်ခဲ့ရပါပြီ..
ကားစီးတဲ့သူတွေကို ငါးပိသိပ် ငါးချဉ်သိပ်တင်.. နေပူထဲကားထိုးပြီး နောက်လူစောင့်.. တစ်တန်းကို လူငါးယောက်ဆိုပေမဲ့..၀တဲ့သူပါရင် အတိုးအလျော့လုပ်ပေးသင့်တာကိုလဲနားမလည်.. ထိုင်ရတဲ့ခုန်လေးတွေက ဒူးလေးတွေထောင်ပြီး.. ကားများစပြီးတောင်ပေါ်တက်တာနဲ့ ဖင်က ခုံပေါ်မှာတင်လို့မရတော့ဘူး.. နောက်လူရဲ့ဒူးကခါးကိုထိုး... ရှေ့လူကလဲ ကိုယ့်ကိုဖိ.. အလယ်မှာထိုင်ရင်ဖြင့်.. ကိုင်စရာကမရှိ.. တကယ်ကိုပဲ ခိုးကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပါ.. ခုဆိုနောက်တစ်ခုပိုဆိုးလာသေး.. ကားပေါ်လူတွေ အကျအနထိုင်ပြီးမှ နေပူထဲကားရပ်ပြီး.. အလှူခံတာ.. ၁ယောက်၂ယောက် မထည့်မချင်းလူတွေကို ငါးခြောက်ဖုတ်လို နေလှန်းထားတာ.. ဓားပြတိုက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ.. စေတနာမပါပဲလှူတော့ရော ကုသိုလ်ရမယ်ထင်လား... ကြည့်နေတယ်.. တောင်တက်ကားစီးတိုင်း ရန်မဖြစ်တဲ့အခေါက်မရှိဘူး.. ကိုယ်နဲ့မဖြစ်ရင်.. တခြားအုပ်စုနဲ့အဲဒိကားသမားနဲ့ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ.. ရန်မဖြစ်ရင်တောင်..ခရီးသည်တွေရဲ့ စောင်းမြောင်းလှောင်ပြောင်သံလေးတွေ..ကွန်မလိန်းလေးတွေကိုကြားရတာပါပဲ..
နောက်ပိုင်းကျိုက်ထီးရိုးရောက်တိုင်း.. တောင်တက်ကားမစီးချင်ဘူးပြောတိုင်း ဖေဖေမေမေနဲ့စကားများရတာလဲ စိတ်ညစ်စရာပါ.. ဖေဖေမေမေက လူကြီးဖြစ်လာတော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့..ကျွန်မတို့ကိုလဲ ခြေကျင်လမ်းကို စိတ်မချ..ဒီတော့အားလုံးကားနဲ့ပဲတက်ရပါတယ်.. ကားနဲ့တက်လို့ ရှိရင်တော့ မဗေဒါ စကားတစ်လုံးမှလဲမပြောတော့ပါဘူး.. ကွန်ပလိန်းလဲ ကားသမားကို မတက်တော့ပါဘူး.. ကားပေါ်ရောက်ရင် သူတို့လက်ခုပ်ထဲကရေဘ၀ရောက်ရပြီဆိုပြီး စိတ်ကို လျော့ထားလိုက်ပါတော့တယ်.. တစ်ခါတစ်လေကံကောင်းရင်တော့ ကားရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီးစီးပါတယ်.. အဲဒါကမှ ထိုင်ရတာထက်စာရင်သက်သာပါသေးတယ်.. အဲလိုစီးရဖို့ကလဲ ကိုယ့်အုပ်စုမှာ ယောင်္ကျားလေးပါရင်ပါ(အစ်ကိုတ၀မ်းကွဲလိုမျိုး)ကျမှ ကျမဖေဖေကစီးခွင့်ပြုတာပါ.. ဒါပေမဲ့မျက်နှာကို လေစားလို့ မျက်နှာတွေမဲပါတယ်... လမ်းလျှောက်တက်ရင် အေးအေးဆေးဆေး တောတောင်သဘာဝခံစားရင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မှလဲ ရန်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး..
အချုပ်ပြောရရင်..ကျိုက်ထီးရိုးကို ဘာကြောင့်လာကြပါသလဲ... ဘုရားဖူးဖို့ရယ် တောတောင်သဘာဝခံစားဖို့ရယ်ပါ.. ရင်ပြင်တော်ပေါ်စောစောရောက်တော့ရော ဘာထူးခြားသွားပါသလဲ.. ဘုရားကို အချိန်ပိုကြာကြာရှိခိုးရလို့လား.. တခြားနေရာတွေလျှောက်သွားချင်လို့ စောစောရောက်ချင်တာလား.. တခြားနေရာတွေတောင် လျှောက်သွားချင်သေးတာ တောင်တက်တောလမ်းနဲ့ အခြားနေရာကတောလမ်းနဲ့ ဘယ်လောက်များကွာခြားနေလို့လဲ.. ဒီတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ကုန်ကျစရိတ်လဲသက်သာ..စိတ်အနှောင့်အယှက်လဲသက်သာ.. တောတောင်သဘာဝခံစားရင်း လူငယ်ပီပီ ပျော်ပျော်ပါးပါးလမ်းလျှောက်ပဲတက်သင့်ပါတယ်.. တောင်ပေါ်ရောက်တော့ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ထမင်းဆိုင်တွေက သိပ်မကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ခပ်များများလေးလွေးလိုက်.. ပြီးတော့ ရင်ပြင်တော်မှာနေပူနေတုန်း တောင်လေလေးအခန်းထဲတိုးဝင်ပြီးအေးတုန်း ပင်ပင်ပန်းပန်းတောင်တက်လာရတဲ့ အမောတွေကို အပြည့်အ၀အိပ်ပြီးဖြေလိုက်.. အိပ်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း...
လူဆိုတာတော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်မို့ ကားနဲ့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူများကတော့ ကားနဲ့ပဲတက်ပေါ့နော်..လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးပဲလေ..
၂) ယခုခေတ် ထမင်းဆိုင်
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ထမင်းဆိုင်တွေပါ.. မီးလောင်မှုမဖြစ်ခင်ထိ ပျဉ်နဲ့ဝါးခင်းလေးတွေနဲ့ဆောက်ခဲ့ပင်မဲ့.. မီးလောင်ပီးနောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးအတွက် တိုက်အိမ်တွေပြောင်းဆောက်လိုက်တာကို ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့.. တိုက်အိမ်တွေထဲမှာနေရမှတော့ မဗေဒါအတွက်မြို့ပြနဲ့သိပ်မထူးပါဘူး.. အဆိုးဆုံးက လေမ၀င်ပါဘူး..
စားသောက်ဆိုင်တွေကလဲ တည်းခိုရင်ပိုက်ဆံယူပါတယ်... တည်းခပိုက်ဆံယူမှတော့ သူတို့ဆိုင်မှာ ထမင်းစားတာမစားတာက အဓိကမကျတော့ဘူးကျွန်မထင်ပါတယ်.. ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ကြိုက်တာစားမှာပေါ့..ဒါကျပြန်တော့ ထမင်းဆိုင်ကလူတွေက ငြူစူပြန်ပါရော.. ခရီးသည်နဲ့ ဒေသခံကြားမှာပြဿနာတွေပိုလာပါတယ်.. ဒီတော့သူတို့အမြတ်ရအောင် အစားအသောက်မှာ ခိုလာပါတယ်.. ထမင်းပေါင်းဆိုရင် ဂေါ်ပီရိုးပဲပါပါတယ်(စင်္ကာပူက အင်းလေးအတိုင်းပဲ).. အရင်က လမ်းပန်းမကောင်းလို့ ရှိတာလေးကို တောင်ပေါ်ဈေးပေးပြီးစားရတာ ကိစ္စမရှိပေမဲ့.. ယခုခေတ် ကားလမ်းပေါက်ပြီး ပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူနေတဲ့အထိ တောင်ပေါ်ဈေးပေးပြီး အစားသောက်မကောင်းတာတော့ နဲနဲလွန်တယ်ထင်ပါတယ်.. ပိုက်ဆံပေးရတာကိုထားပါတော့.. service တော့ ကုန်တာနဲ့တန်အောင်ရသင့်တယ်ထင်ပါတယ်... အရင်က ဒေသခံနဲ့ ခရီးသွားကြား ရိုင်းပင်း စေတနာထားတတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလေးပျောက်ကွယ်နေပါပြီ.. လောဘနဲ့ ရိတ်မယ်ဝါးမယ်ဆိုတာချည်းပါပဲ.. ဘုရားဖူးခရီးထွက်လာတုန်းခဏမို့ ခရီးသွားတွေက ပြဿနာမရှာပဲပေးနေပင်မဲ့ အားလုံးကမသိပဲတော့မနေဘူးလို့ထင်ပါတယ်..
၃) ကန်ထရိုက် အလှူခံမဏ္ဍပ်များ
နောက်အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စကြီးကတော့ အလှူခံမဏ္ဍပ်တွေပါ.. အရင်ကဒီလောက်မများပါဘူး.. ခုတော့ ကန်ထရိုက်တွေနဲ့လုပ်စားနေတာပါ.. ကျွန်မသိသလောက် တစ်နှစ်တစ်နှစ် တာဝန်ရှိသူတွေက နေရာတွေကို လေလံပစ်ပါတယ်.. ပြီးရင် ပုတ်ဖြတ်ပေးပြီး အလှူခံစား.. မြတ်ရင်မြတ်သလိုပေါ့.. အဲဒိမှာတင် လောဘတွေစတင်ပါလာပါတော့တယ်.. ခရီးသွားတွေကို လမ်းပိတ်ပြီး အလှူခံမဏ္ဍပ်ဆောက်...
ပြီးရင်.. "ဘုရားလေးတော့ ၀င်ကန်တော့သွားပါအုံး.. ရေချမ်းစင်က ရေလေးသောက်သွားပါအုံး" လို့မြူဆွယ်.. ဘုရားဖူးတွေက ၀င်ကန်တော့ရင် "ရွှေသင်္ကန်းလေး.. ကျောက်ပြားလေး..ရေအိုးစင်လေး.."စသည်ဖြင့် များရာကနေ နည်းရာ မလှူမချင်း ထလို့မရအောင် ဇွတ်အလှူခံ.. မလှူရင်ပဲ ငရဲလားတော့မဲ့ပုံမျိုးပြော.. ကျွန်မနှစ်တိုင်းသွားတိုင်း ငယ်ငယ်ထဲကလှူတာတွေပေါင်းရင် အဲဒိကစေတီတွေ ရွှေအတိပြီးနေပါပြီ..
သူတို့အကြောင်းသိလို့ ၀င်မကန်တော့ပဲသွားရင်လဲ.. "ဘုရားလာပြီး ဘုရားတောင်ဝင်မကန်တော့ဘူး.. ဘာဖြစ်ပါစေ..ညာဖြစ်ပါစေ" ဆိုပြီး လှမ်းကြိမ်ဆဲတဲ့အသံခပ်သဲ့သဲ့ကိုလဲ ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ကြိမ်ရေမနဲတော့ပါဘူး.. ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ ကျိုက်ထီးရိုးရဲ့ လှပတဲ့ဓလေ့လေးတွေ အကျဉ်းတန်ခဲ့ရပါတယ်..
၄) ရင်ပြင်တော်ပေါ်က ကျောက်ပြားများ
ပြောချင်တာတွေရှိပါသေးတယ်.. ရင်ပြင်တော်ပေါ်ကကျောက်ပြားတွေကို လဲတာ.. အရင်ကကျောက်ပြားလေးတွေက ပန်းပုံဖောင်းကြွလေးတွေ (အောက်ကခရီးသွားဗွီဒီယို ဆီမီးပူဇော်နေတဲ့ပုံတွေက ကျောက်ပြားမျိုးပါ)ဟာ အလွန်မှ နေပူခံပြီး လှလဲလှပါတယ်.. တချို့ဆိုဘယ်သူကစလိုက်လဲတော့မသိ ပုံလေးတွေကို အစဉ်တိုင်းလိုက်နင်းပြီး အောင်မြေနင်းတဲ့ ဓလေ့လေးတောင်ရှိပါတယ်.. တချို့နေရာလေးတွေကတော့ နှစ်တွေကြာပြီး ကြွတက်နေပါတယ်.. အဲဒါကို ပြင်သင့်တဲ့နေရာပဲမပြင်ပဲ ယဉ်ပြင်တော်တစ်ခုလုံးက ကျောက်ပြားတွေကို လဲပြစ်တာပါ..
ယနေ့ခေတ် ကျောက်ပြားများဖြင့် ရင်ပြင်တော်
စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့လုပ်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့.. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျိုက်ထီးရိုးကို အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်သွားနေတဲ့ ကျွန်မအဖို့တော့ သိသိသာသာကွဲလွဲတာကို မြင်ပါတယ်.. အဲဒါဘာလဲဆိုတော့.. ခုလဲလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ နေ့လည်ဘက်ဆိုရင် ယဉ်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ခရီးသွားတွေ ပြေးနေရတာပါ.. ခြေထောက်ပူလွန်းလို့ပါ.. အရင်ကဒါမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မကိုယ်တိုင် ပြေးရတိုင်း ကျောက်ပြားလဲလိုက်တဲ့သူကို အပြစ်တင်မိပါတယ်.. ပျက်နေရင် ပျက်တဲ့နေရာကိုပြင်ပါ.. ပျက်တာကလဲ ကြွတက်နေတာပါ..ပြန်အင်္ဂတေကိုင်လိုက်ရင်ပြီးနေတာကို.. အကောင်းစားကျောက်ပြားတွေနေရာမှာ.. အပေါစားကျောက်ပြားတွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်တာကတော့ ခရီးသွားဘုရားဖူးတွေ အတွက်ဒုက္ခပိုစေပါတယ်... (စစချင်းပြောင်းတုန်းက အားလုံးကျောက်ပြားအပူတွေပါ.. ခုတော့ လူတွေဒုက္ခများလွန်းလို့ စေတနာထက်သန်စွာနဲ့ အပူခံကျောက်ပြားနဲ့ ပူတဲ့ကျောက်ပြားနဲ့ကို ရောပေးပြီးပြောင်းပေးထားကြောင်းသိရ.. အရင်ခေတ်ကျောက်ပြားလောက်တော့မကောင်းကြောင်း)..
၅) မတရားကောက်တဲ့ ကင်မရာခွန်
နောက်ပြီး.. အပန်းမကြီးပင်မဲ့..စိတ်ထဲဘ၀င်မကျတာလေးကတော့ ရင်ပြင်တော်ပေါ် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကိစ္စပါ.. မြန်မာပြည်ရဲ့နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဓလေ့ကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ ကင်မရာခွန်ဆိုတာကြီးကို ကျွန်မသူတို့နဲ့ပြိုင်ပြီး ကွန်ပလိန်းတက်မနေချင်တော့ပဲ မရှိတဲ့သူတွေမို့ သနားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ပေးလေ့ရှိပါတယ်.. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ဖော်ရွေလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေနိုင်ငံကြီးမှာ အရာရာ ငွေမျက်နှာလိုက်ပြီး.. ကင်မရာကြေးဆောင်ရတာ အလွန်မှရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဂေါပကဘာနစ်နာသွားပါသလဲ.. တခြားခရီးသွား ဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်သွားပါသလဲ.. လေထုညစ်ညမ်းသွားသလား.. ဘာမှအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိပဲ သဘာဝရှိနေတဲ့ရှုခင်းလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်တာကို ကင်မရာခွန်ဆိုတာကြီးကောက်တာ လွန်လွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ထိခိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် ရင်ပြင်တော်ပေါ်လုပ်စားနေတဲ့ ကင်မရာဆရာတွေပဲထိခိုက်တာပါ.. ခုခေတ်မှာတော့ ဟန်းဖုန်းနဲ့လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရနေပါပြီ.. ကဲသူတို့ဘယ်လို ကွန်ထရိုးလုပ်မလဲ စောင့်ကြည့်ချင်သေးပါတယ်..
၆) တောင်ပေါ်က ရေ (အလှူရှင်အတွက် စိတ်မကောင်းစရာ)
အရင်ကတောင်ပေါ်ကို ရေထမ်းပဲရှိလို့ ရေဈေးတွေကြီးနေပင်မဲ့..ခုဆို သီတဂူရေလှူအသင်းက တောင်ပေါ်အရောက်ရေပိုက်လှူဒါန်းပြီး တာတောင်.. ဂေါပကက တစ်နှစ်တစ်ခါလေလံဆွဲပြီး ကန်ထရိုက်ရောင်းစားနေတော့.. ဘုရားဖူးခရီးသည်တွေအတွက် ရေဈေးကကြီးမြဲကြီးနေတာပါပဲ...
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောချင်တာတွေကျန်ပါသေးတယ်...ရွှေသင်္ကန်းကို ၄၈၀ကျပ်ရေးထားပြီး.. ၅၀၀တန်ပေးရင်ပြန်မအမ်းတာ.. မိန်းကလေးတွေကို သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစားဆိုပြီး ဘောင်းဘီပေးမ၀တ်တာ..(လုံလုံချုံချုံရှိပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိရင် ဘောင်းဘီဝတ်တာသရုပ်မပျက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်)သူတို့စည်းကမ်းထုတ်မှ ဘောင်းဘီပေါ် လုံချည်ထပ်ပြီး ပိုသရုပ်ပျက်တာ.. အသေးစိတ်တွေပြောရင် ပိုစ့်လဲတအားရှည်နေပြီဖြစ်လို့ ဒီလောက်နဲ့နားပါရစေ..
မဗေဒါအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ လူငယ်တွေအတွက် လူငယ်ပီပီ အခြေအနေပေးမယ်ဆိုရင် တောတောင်သဘာဝခံစားရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး လမ်းလျှောက်တက်ကြဖို့... တက်ကြည့်ရင်အရသာသိသွားမှာပါ.. အရင်ခေတ်လို ခြေကျင်တက်တဲ့သူသိပ်မရှိတော့ ဆိုင်တွေတော့သိပ်မရှိတော့လို့ အရသာကတော့ တထပ်ထဲကျမှာမဟုတ်ပေမဲ့ ကားနဲ့တက်တာထက်စာရင် စိတ်ချမ်းသာပါသေးတယ်..
ယခုလို တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ.. လူတွေရဲ့လောဘလေးတွေကို ရှိသင့်သလောက်သာထားပြီး.. ဆင်ဖြူတော်မှီပြီး ကြံစုတ်တဲ့ အလုပ်မျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး.. ခရီးသွားတွေပိုက်ဆံကုန်ပြီး တန်ရာတန်ကြေးဝန်ဆောင်မှုလေးတွေပြန်ရမယ်ဆိုရင်.. ကောင်းတဲ့ဘက်က မှန်မှန်ကန်ကန် ပြုပြင်မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ဖြင့်... ကျွန်မတို့ ယုံကြည်မြတ်နိုးပြီး လှပတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီဟာ ဒိထက်မက နာမည်ကြီးလူသိများကာ ကမ္ဘာကအံ့သြရှုမောလောက်ပြီး.. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို စွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်သွားမှာပါ..
အမှန်တော့လဲ ဒီလိုစနစ်တွေဖြစ်နေတာရဲ့ အဓိကတရားခံဟာ... စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းထဲကလို.. "လွယ်နေတာကို ခက်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်" ဆိုတဲ့ လူတစ်စုကြောင့်လို့ ထင်မိပါတော့တယ်... မဗေဒါဖြစ်စေချင်သော ကျိုက်ထီးရိုးစေတီနဲ့ ယခင်က ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးကို တမ်းတရင်း ဤပိုစ့်လေးနဲ့ ဂါရ၀ပြုလိုက်ပါတယ်..
စာကြွင်း။ ။ ဤပိုစ့်ကို မဗေဒါ၏တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ထင်မြင်ချက်ဖြင့်ရေးသားခြင်းဖြစ်၍ ကြိုက်သလိုသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်..
ဤပိုစ့်မှ ယနေ့ခေတ် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဓာတ်ပုံများကို ကိုပီကေ၏ ကျိုက်ထီးရိုးသွားတောလား ဆိုသည့်ပိုစ့်မှ ကိုပီကေခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကူးယူဖော်ပြသည်..
အောက်က ဗွီဒီယိုလေးကတော့ ကျွန်မတို့မိသားစုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျိုက်ထီးရိုးသွားပြီးရိုက်ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံစုဆောင်းမှုပါ.. မဗေဒါမမွေးခင်ထဲကပုံလေးတွေလဲပါပါတယ်.. ခန့်မှန်းခြေ ၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၅ ထိကပုံတွေပါ.. ပုံထဲမှာပါတဲ့ အသေးဆုံးလေးက မဗေဒါပေါ့နော်.. ဟဲဟဲ...
Posted by mabaydar at 10:42 PM 16 comments :
Labels: Video , ခရီးသွားမှတ်တမ်း , ဝေဖန်ရေး
ကိုယ်တိုင်လုပ် fan made mv (သို့) Last Friends (J-drama)
ကြွားစရာတွေထဲက တစ်ခုကို ကြွားလိုက်ပါအုံးမယ်.. ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်မ ပထမဆုံးလုပ်ထားတဲ့ fan made mv ပါ...
ဝါသနာမပါ.. စိတ်မဝင်စားတဲ့သူအတွက်ကတော့ ဘာမှကြွားစရာလဲ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ချင်ထင်မှာပါ..
ထားပါတော့.. ဒီ Music ဗွီဒီယိုလေးကို လုပ်ဖို့.. ပထမဆုံး ကျွန်မ ထည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါတဲ့ Episode တွေကို ပြန်လိုက်ရှာရပါတယ်..
ဆိုလိုတာကတော့ အပိုင်း ၁၁ပိုင်းလုံး အကုန်ပြန်ကြည့်ရပါတယ်.. ပြီးမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အခန်းအများဆုံးပါတဲ့ အပိုင်းကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရပါတယ်...
စုစုပေါင်း ၅ ပိုင်းလောက် ကျွန်မဒေါင်းလုပ် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်.. ဒါတောင်တချို့ အခန်းတွေ ထည့်ချင်ရက်နဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရမှာ မတန်လို့ မထည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး..
နောက်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အခန်းလေးတွေရအောင်.. မူလရုပ်ရှင်ထဲက ဖြတ်ထုတ်ရပါတယ်... ဒါလဲတော်တော် ခေါင်းစားပါတယ်.. အချိန်ကုန်ပါတယ်
ပြီးတော့ သီချင်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်.. ဘယ်အခန်းကို ဘယ်မှာထည့်မယ်.. ထည့်ချင်တဲ့ အခန်းကများပြီး သီချင်းက ၆ မိနစ်ပဲရှိလို့ ထပ်တလဲလဲ ကြည့်ပြီး ပြန်စီစစ်ရပါတယ်..
ဒါတောင် သီချင်းကို အဆုံးမှာ ၂ကြော့ပြန်ထားရပါတယ်...
သူများတွေရော ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုပြီး.. Youtube မှာ ကျွန်မလို ဝါသနာအရလုပ်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို လိုက်ကြည့်ပါတယ်...
တကယ်လုပ်ကြည့်မှ မလွယ်မှန်းသိပါတယ်... တော်တော်လေး ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အပိုင်းတွေလဲရှိပါတယ်..
Window Movie maker တချို့ effect တွေကို ကောင်းကောင်းမသုံးတတ်သေးတော့... အလုပ်ရောက်ရင် အဲဒိ ဆော့ဝဲလ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး..
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို research လိုက်ရှာပြီးဖတ်ရပါတယ်... ဥပမာ.. နောက်ခံတေးပဲပါပြီး.. မူလ အသံတွေကို ဖျောက်ချင်တာမျိုး..
နောက်ခံတေးကကျယ်ပြီး.. မူလအသံသဲ့သဲ့လဲ ပါချင်တာမျိုးပါ.. ဒါကဒီဗွီဒီယိုလုပ်မှ မဗေဒါသိသွားတဲ့ function ပါ.. မသိခင်တော့ တော်တော်ရှာရပေမဲ့..
သီချင်းကိုအလည်မှာ ခဏရပ်ပြီး.. စကားပြောခန်းထည့်တာ.. နောက်အဲဒိသီချင်းကို ပြန်ဆက်ရတာ.. ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ရတာ.. ကြည့်ရင်မသိသာပင်မဲ့..
လုပ်ရတဲ့သူအတွက် စိုက်ထုတ်ရတဲ့ အားနဲ့.. ပေးရတဲ့ အချိန်မနည်းပါဘူး..
ဒီရုပ်ရှင်ကိုမှလုပ်ဖြစ်သွားတာကတော့.. အဲဒိထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းကို မထင်မှတ်ပဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆီက ရလိုက်လို့ပါ..
နောက်ပြီး.. ဒီ ရုပ်ရှင်မှာပါတဲ့... လူဆိုးမင်းသား Sousuke အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ Nishikido Ryo ကို ကြိုက်လို့ပါ..
သူ့ကို ကျွန်မ အရင်ကပိုစ့်တင်ဖူးတဲ့... One liter of Tear ရုပ်ရှင်ကားမှာ အလွန်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သဘောကျခဲ့ပါတယ်..
ခုဒီကားကြည့်ပြီးတော့ သူဟာ လူဆိုးလုပ်လုပ် လူကောင်းလုပ်လုပ် သူလုပ်ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိသွားလို့ပါ..
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ အဲဒိကားထဲက သူသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဇာတ်ကောင် စရိုက်ကို တော်တော်မျာများကမုန်းကြပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ မဗေဒါကတော့ သူ့ကို အနည်းနဲ့အများနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်.. သနားစရာလဲကောင်းပါတယ်..
သူ့ကို သူ့ဘက်ကနေ ပရိတ်သတ်ကြီးကို နားလည်ပေးစေချင်လို့ ဒီ ဗွီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်တာပါ... ရုပ်ရှင်ကားနာမည်က Last Friends ပါ...
သူဟာ Child Welfare Division အစိုးရအလုပ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စိတ်ထားကောင်းကောင်းလူတစ်ယောက်ပါ..
သာမာန်အချိန်မှာ စိတ်ကောင်းရှိပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့... သူ့ချစ်သူ Michiru နဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ အလွန်တရာမှ အူတိုတတ်တဲ့သူမျိုးပါ..
ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင် သူ့ချစ်သူကိုလဲဒေါသအလျှောက် ရိုက်နှက်တတ်သလို.. သူ့ကိုသူလဲ အပြစ်ပေးတတ်ပါတယ်..
ဥပမာ.. သူ့ချစ်သူက ပြန်ရောက်သင့်တဲ့အချိန်မရောက်လို့ နောက်ကျရင် အိမ်ထဲပေးမဝင်ပဲ အိမ်ပြင်မှာ ၃နာရီလောက်နေခိုင်းပြီး.. သူကိုယ်တိုင်လဲ သူ့ကိုယ်သူ ၁နာရီတစ်ခါ
သူ့ချစ်သူမှာ ငယ်ငယ်ထဲက ခင်တဲ့ TomBoy သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိပါတယ်.. အဲဒိ TomBoy ကို သူ့ချစ်သူက မိန်းကလေးအချင်းချင်းပဲ ဆိုပြီး ရိုးရိုးခင်ပေမဲ့..
Sousuke တစ်ယောက်ကတော့ သဝန်တိုမြဲပါပဲ.. သူသဝန်တိုမယ်ဆိုလဲ တိုလောက်ပါတယ်.. တကယ်လဲ အဲဒိ TomBoy ကမိန်းကလေးစိတ်လုံးဝမရှိပဲ.. သူ့ချစ်သူ Michiru ကို တိတ်တခိုးချစ်နေတာပါ...
ဒီဘဝမှာ သူသည်မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ Michiru ကသူ့ကိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ ဖွင့်မပြောပဲ.. ကျိတ်ခံစားနေရတဲ့သူပေါ့..
သူက အဲ လိုသဝန်တိုတိုင်း သူ့ချစ်သူကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တော့ ကြာတော့ Michiru လဲ သူ့ဆီကထွက်ပြေးတော့တာပေါ့..
သူ့သူငယ်ချင်း TomBoy ကခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်..
အဲလိုကျပြန်တော့လဲ သူက အတင်း ပြန်လိုက်ခေါ်ပါတယ်... ပြန်ရောက်လာရင် ပြန်နှိပ်စက်ပါတယ်..
နောက်ဆုံးတော့ သူ့ချစ်သူကို အကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်နာကျည်းအောင်လုပ်မိသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့..
နောင်တရပြီး.. သူ့ချစ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့လမ်းကို သူရွေးချယ်သွားပါတော့တယ်..
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူက ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Psycho ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဓိကနေရာက ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်..
အမှန်တော့ ဒီကားက Friendship, love and relationship, Life, Personality disorder, Attitude to the happy life စတဲ့ အချက်လေးတွေကိုလဲ..ထိထိမိမိ ပညာပေးသဘောမျိုးရိုက်သွားတဲ့အတွက်.. ယူတတ်ရင်ရပါတယ်...
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ သူ့ချစ်သူကို ကိစ္စသေးသေးလေးတွေက အစလိုက်သဝန်တိုပြီး ရိုက်တာ နှက်တာမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့...
သူ့ကောင်းကွက်လေးတစ်ခုကို ကျွန်မရေရေလည်လည်သဘောကျတာကတော့... အချစ်ကြီးတာပါ...
တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သစ္စာရှိတာပါ... ချစ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတာကို အချိန်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေပြီး ဂရုစိုက်နေတာပါ..
ဂရုစိုက်ကြည့်လေ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေ တွေ့လေပါပဲ..
ဒါပေမဲ့ အလွန်အကျွံဆိုတော့လဲ ခံရတဲ့သူက စိတ်ကျဉ်းကျပ်လာတာပေါ့နော်.. တချို့ကိစ္စလေးတွေကျတော့လဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နားလည်ပေးသင့်တာပေါ့လေ..
မဗေဒါလဲ သူ့လိုပါပဲ.. သူ့လိုတော့ မရိုက်နှက်ပါဘူး.. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အမြဲဂရုစိုက်ပြီးကြည့်နေတတ်တယ်.. ကြည့်လေ အမှားတွေ့လေပါပဲ...
အမှားတွေ့တော့ ပြော.. ပြောတော့ ကိုယ့်ဆီက နောက်ဆုံးထွက်ပြေးတာပေါ့... သူတို့အနေမှန်နေရင် ဒါကဘာပြဿနာမှ ဖြစ်လာစရာမရှိပါဘူး..
ဒီကားကြည့်ပြီးတော့လဲ အဲလိုဖြစ်စဉ်ကိုသတိထားပြီး သင်ခန်းစာတော်တော်ရပါတယ်..
Sousuke ရဲ့ခံစားချက်ကိုလဲနားလည်ပြီး သူ့ကို အရမ်းသနားမိတယ်..
သရုပ်ဆောင်တဲ့သူက Nishikido Ryo ဖြစ်လို့လဲ ပါမှာပေါ့နော်...
အောက်ကမဗေဒါလုပ်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမြည်းစမ်းကြည့်ကြပါ... ဇာတ်လမ်းကိုပဲကြည့်ကြည့်.. မဗေဒါကြိုးစားထားတဲ့ မဗေဒါရဲ့ Effort ကိုပဲကြည့်ကြည့်..
ခံစားပေးသွားကြပါ... အော်.. ဒါပေမဲ့.. ဒီဗွီဒီယိုမှာ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းအခန်းကို ထည့်ထားတဲ့အတွက်.. Spoiler လိုဖြစ်နေပါတယ်..
အဲဒိအတွက် Spoiler မကြိုက်တဲ့သူတွေကို စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောရင်း................................
Sousuke ရဲ့ ခံစားချက်လေးကို ထိထိမိမိလေး လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတစ်ခုလဲ တွေ့လို့ ဝေငှလိုက်ပါတယ်..
အဲဒိသီချင်းလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကလဲ မဗေဒါ ခံစားချက်နဲ့တူလို့ နားထောင်တိုင်း မျက်ရည်ကျရပါတယ်... ခံစားကြည့်ပါ..
Posted by mabaydar at 9:05 AM7comments :
Labels: Drama , Video
စကာင်္ပူမှာကျောင်းတက်ပြီဆိုတော့ ရှောင်လွှဲလို့မရတာ ကွန်ပြူတာနဲ့ အင်တာနက်ပေါ့... သူတို့တွေနဲ့ မရင်းနှီးခဲ့ခင် သူတို့ကို အသုံးချရာမှာ မဗေဒါတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ.. မလိုအပ်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရန်ပွဲလေးတွေကို ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တယ်.. ခုပြန်ပြောပြရင်တောင် အဲဒိတုန်းက တက်ကနော်လောဂျီနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသိနည်းပါးခဲ့တဲ့ မဗေဒါ့အဖြစ်က တော်တော်ရီစရာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်...
မဗေဒါ၁ဝတန်းအောင်ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာသင်တန်း ဝင်းဒိုးလေး.. ဘာလေး.. စီပရိုဂန်းမင်း(တစ်လုံးမှမသိခဲ့ပါ).. အဲဒိသင်တန်းလေးတွေတော့ တက်ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်.. တက်ပြီးတော့လဲ အလေ့အကျင့်မရှိတော့ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပါပဲ... အဲဒိတုန်းက အင်တာနက်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သိပ်မရှိသေးဘူး ထင်ပါတယ်... အင်တာနက်ကဖေးဆိုလုံးဝမရှိသလောက်ပဲထင်ပါတယ် (နည်းနည်းပါပါးရှိရင်တော့လဲရှိမယ်... စိတ်မဝင်စားလို့ သတိမထားမိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်).. ရှောင်နေလို့လဲရတာကိုး....
မဗေဒါ စကာင်္ပူရောက်စက ကွန်ပြူတာ အင်တာနက် အသိဥာဏ်ဘယ်လောက်နည်းလဲဆိုရင်.. ကွန်ပြူတာအသိကိုပြောရရင်.. Hardware နဲ့ Software ဘာကွာမှန်းမသိ... အင်တာနက်ဆိုတာ "အင်တာနက်စက်ကြီး" သက်သက်တလုံးရှိတယ်လို့တောင်ထင်ထားတာပါ... ကွန်ပြူတာကနေသုံးရမှန်းမသိပါဘူး.. Uploading ဆိုတာဘာမှန်းမသိ.. Downloading ဆိုတာ အဘိဓာန်လှန်ရှာရမလောက်ထိပါပဲ..
ဒီလိုနဲ့ မဗေဒါရဲ့ ရွှေမဟာ ပိုလီကျောင်းကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပြီးသကာလ.. စတင်ပြီး ဦးနှောက်မှာ မှတ်စရာတွေ တမဟုတ်ချင်းတိုးလာတာကတော့... Password လို့ခေါ်တဲ့ လျှို့ဝှက်စာလေးတွေပါ.. ဒါတောင် မဗေဒါ အစ်မကသူကျွန်မအတွက်လုပ်ပေးပြီးသားလေးတွေကို မှတ်ခိုင်းတာပါ.. စာကြည့်တိုက်မှာသုံးဖို့အတွက် User name and password,
ကျောင်း facility မှာသုံးဖို့ User name and password, နောက်ပြီး Yahoo Mail account တစ်ခုလဲဖွင့်ပေးပါတယ်.. User name and password ဆိုတာဘာအတွက် သုံးရမှန်းတောင် ကျွန်မ မသိပေမဲ့ မှတ်ဆိုတော့လဲ မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်...
ကျောင်းတက်ပြီး ၁ပတ်လောက်ထိတော့ ရှောင်လို့ရပါသေးတယ်.. နဲနဲပါးပါးဆို ကိုယ့်အစ်မကို လုပ်ခိုင်းလိုက်လို့ရသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းသူလဲ သူ့ ပရောဂျက်နဲ့သူဖြစ်တာရော.. ကျမရဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့မထိတွေ့မနေရကိစ္စတွေကလဲ များသထက်များလာပါတယ်.. ကျောင်းမှာ ပရောဂျက်တွေလုပ်လို့ မသိတာရှိရင် Yahoo နဲ့Google ကိုရှာလိုက်လို့ပြောတော့... မဗေဒါအတွက်တော့ Yahoo နဲ့ Google ဆိုတဲ့ ဆရာတရုတ်ကြီး ၂ယောက်ကို လိုက်ရှာမေးရမယ်ထင်နေတာပေါ့.. Lecture note တွေကို Ole မှာသွားထုတ်(Download)ရမယ်ဆိုလဲ.. Ole ဆိုတဲ့ Department ကဘယ်နားမှာလဲလို့ ပြန်မေးမိမှာပါ.. ဒီလိုနဲ့ပဲ Lecture note ကို သူများဆီကပဲ ကော်ပီအမြဲစွဲပြီးယူခဲ့ရတယ်.. အတန်းသားတွေကတော့ ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ထုတ်လို့ရနေတာ.. ဘာလို့သူတို့ဆီကယူပြီး ကော်ပီလဲဆိုတာနားမလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်... ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်လေ...
အဲ..ဒီလိုနဲ့ မဗေဒါလဲ User name and password ဆိုတာဘာမှန်းသိလာတဲ့အချိန်.. ကွန်ပြူတာမှာလဲ Microsoftword မှာ စာရိုက်တတ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော် (မရိုက်တတ်လို့လဲမရဘူးလေ.. ပရောဂျက်အကုန်လုံးက လက်ရေးနဲ့မှတင်လို့မရတာ).. Group Project တစ်ခုတင်ခါနီးအချိန်မှာ.. သိတဲ့အတိုင်း မဗေဒါအခန်းထဲမှာ မြန်မာ မဗေဒါတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ Project ကိုလဲ စလုံးတွေ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေနဲ့ပဲတွဲရတော့တာပေါ့..
အဲဒိမှာ Project Dead line နီးနေတဲ့တနေ့မှာ.. မဗေဒါကတော့ ကိုယ့်အပိုင်းကိုယ်ပြီးပါပြီ.. Print ထုတ်ဖို့ကို နောက်မှ ကိုယ့်အစ်မကို ခိုင်းမယ်ပေါ့... အုပ်စုထဲက ပြည်ကြီးတရုတ်မဆီက သူ့အပိုင်းကို တောင်းတော့ သူက ချက်ချင်းပဲဖြစ်သလိုရေးပြီး.. သူသွားစရာရှိလို့ နင် Print ထုတ်လိုက်တဲ့.. ဒစ်ကပ် (disk)ကိုလာပေးပါတယ်..
ကျွန်မပြန်ငြင်းလို့မရလိုက်ခင်မှာပဲ.. သူမထွက်သွားပါတယ်.. ကျွန်မလဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်သူများတွေလုပ်တာ မြင်ဘူးသလောက် Print ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်တာတွေ့တော့ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါတယ်.. သိတဲ့အတိုင်းပဲ Print ပြီးရင် Print Option တို့ Printer selection တို့ (Printer တွေက အများကြီးရှိလို့ရွေးရတာပါ)... အဲဒိ Box တွေပေါ်လာတော့ ကျွန်မဆက်မလုပ်တက်တော့ပါဘူး.. ဒါနဲ့ အစ်မကိုပဲ ထုတ်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုပြီး.. အိမ်ယူလာလိုက်ပါတယ်.. အိမ်ရောက်တော့ အစ်မကကျွန်မအပိုင်းကို Print ထုတ်ပြီးပါပြီ.. သူ့အပိုင်းပါထုတ်ပေးပါဆိုတော့.. ကျွန်မအစ်မက သူ့အပိုင်းကိုသူအပြီးထိတာဝန်မယူပဲ ထွက်သွားတာ နင့်ကို အနိုင်ကျင့်တာတဲ့.. မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပြောလိုက်တဲ့.. ဒီလိုနဲ့ပဲ.. ကျွန်မလဲ ပရောဂျက် ရေးတုန်းကတောင် ဒီလောက် စိတ်မဖိစီးခဲ့ပဲ Print ထုတ်ဖို့ကျမှ တော်တော်လေးစိတ်ဖိစီးခဲ့ရတယ်.. တရုတ်မကို နင့်ဘာနင် Print ထုတ်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတော့ သူကလဲ ကျွန်မကို တွက်ကပ်လိုက်တာပေါ့.. ကျွန်မဖက်က အခက်အခဲကို သူကမှနားမလည်ပေးနိုင်တာ.. ဒါနဲ့ မဗေဒါလဲ စိတ်ထဲ မွန်းကြပ်လာပြီး.. ဒေါသကလဲ စကားပြောရင်းထွက်လာပါတယ်.. ဖုန်းထဲကဆိုတော့.. သူကလဲ အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမပြောတတ်လေတော့.. စကားပြောရတာ လက်ပေါက်ကပ်လာပါတယ်.. ဒါနဲ့ စိတ်တိုပြီး.. ကျွန်မလဲ.. အင်္ဂလိပ်လို ရွှတ်ရွှတ်ရွှတ် မှုတ်ပြီး သူ့ကို ကောထဲ့လိုက်ပါတယ်.. ဖုန်းချပြီးတော့ ကျွန်မအစ်မက "ငါ့ညီမ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းသားပဲ"လို့ မဆူတဲ့အပြင်အားတောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်.. (အဲလို ချစ်ဖို့ကောင်းတာပါ)... ဒါက တော့ မဗေဒါရဲ့ ကျောင်းသူဘဝ ပထမဆုံး ပရောဂျက်ရန်ပွဲပါ...
အဲဒိ ရန်ပွဲလေးပြီးတော့ မဗေဒါ မှတ်မှတ်ရရ သူငယ်ချင်းကောင်း ၂ ယောက်ရလိုက်ပါတယ်.. တစ်ယောက်က မဗေဒါကို တော်တော်လေးနားလည်ပါတယ်.. မဗေဒါ ခုလို မသုံးတတ်မစွဲတတ်ဖြစ်နေလို့ ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ သူမသိပါတယ်.. မဗေဒါ မျက်ရည်တရွှဲရွှဲနဲ့ ညည်းတိုင်းသူမနားထောင်ခဲ့တာကိုး... သူမကလဲ ပြည်ကြီးတရုတ်မပါပဲ.. အသက်က ၃ဝ လောက်ဆိုတော့ မဗေဒါထက် ၁ဝနှစ်ကျော်ကြီးပါတယ်.. သူမလဲ မဗေဒါကို နားလည်တော့ ဟိုပရောဂျက်လုပ်တဲ့ တရုတ်မကို တရုတ်မချင်း တရုတ်လိုသွားပြောပါတယ်.. ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူသင့်ကြောင်း.. အငယ်ကို အနိုင်မကျင့်သင့်ကြောင်း.. (အဲဒိတုန်းက တစ်တန်းလုံးမှာ ကျွန်မအငယ်ဆုံးပါ.. သက်တူရွယ်တူတော့ ၃ယောက်လောက်ရှိပါတယ်) သွားပြောတော့.. ဟို ပရောဂျက်တရုတ်မကလဲ.. Print လေးထုတ်ခိုင်းတာ သူ့ကို လူဆိုးမကြီးလိုဖြစ်အောင်လာပြောနေတယ်ဆိုပြီး ၂ယောက်စကားများကြတာ ပိုလီသုံးနှစ်လုံး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားမပြောကြတော့ပါဘူး... ကျွန်မလဲ ပရောဂျက်တရုတ်မနဲ့ ပထမနှစ်တစ်နှစ်လုံး စကားမပြောပဲနေခဲ့ပါတယ်..
အဲ.. ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ specialization လိုင်းရွေးတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတရုတ်မနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ယူတဲ့လိုင်းမတူပါဘူး.. ကျွန်မယူတဲ့လိုင်းကို အတန်းထဲက မိန်းကလေး ၂ယောက်ပဲရွေးပါတယ်.. အဲဒါက ကျွန်မနဲ့ ပရောဂျက်တရုတ်မပါ.. ဒုတိယနှစ်စစချင်း အခန်းထဲမှာ အသိဆိုလို့ ကျွန်မတို့၂ယောက်ပဲရှိတော့ သူနဲ့ သည်းခံပြီးပေါင်းခဲ့ပါတယ်.. သူကလဲ အဲဒိအချိန်မှာ ကျွန်မကို တော်တော်လေးနားလည်နေပါပြီ... ကျွန်မကလဲ ရောက်စကလို ငတုံးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး.. သူ့အကြောင်းကိုလဲ ကျွန်မတဖြည်းဖြည်းသိလာပါတယ်.. ကျွန်မအပေါ်အမြဲကောင်းတဲ့ တရုတ်မနဲ့ သူနဲ့ကလုံးဝ စရိုက် (Type)မတူပါဘူး.. ကျွန်မကလဲ ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်နေတတ်တဲ့သူ.. ဒါပေမဲ့ သူများပုံစံကိုလဲ ငါနဲ့တူရမယ်ဆိုပြီး မလုပ်တတ်တော့.. ၂ယောက်လုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်.. Final Year Project ကိုလဲ အဲဒိ ပရောဂျက်တရုတ်မနဲ့ပဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ agreement လေးနဲ့ပါ.. "ပရောဂျက်ကိစ္စနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပြန်ခေါ်ဖို့ဝန်မလေးရဘူး.. တစ်ယောက်ကပြန်ခေါ်ရင်လဲ နောက်တစ်ယောက်က စကားပြန်ပြောရမယ်" ဆိုပြီး စည်းကမ်းထုတ်ထားခဲ့လို့ အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်.. ရန်ပွဲတွေက တော့ မနဲပဲပေါ့.. ဟား.. ဟား...
နောက်အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မဗေဒါအရှက်ကွဲခဲ့တာလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်.. အရမ်းတော့မရီကျပါနဲ့နော်.. ရှက်လို့ပါ...
ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်( 1st year, 2nd sem) မှာ.. Elective subject ရွေးရတော့ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအပေါ်ကောင်းတဲ့ တရုတ်မနဲ့ တူတူ ဂျပန်ဘာသာစကားကို ရွေးခဲ့ပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့ ဂျပန်အတန်းကလဲ ပရောဂျက်ခေါင်းစဉ်တွေရွေးရပါတယ်.. Individual project ပါ.. ကျွန်မကလဲ အချက်အလက်ရှာရလွယ်ကူမဲ့ ထင်တဲ့ "Japanese student lifestyle" ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပါတယ်.. အဲဒိအချိန်ထိ မဗေဒါ internet နဲ့ research ရှာတာကို နဲနဲပါးပါးပဲလုပ်ဖူးပါသေးတယ်.. email လေး Print out လေးတော့ လုပ်တတ်နေပါပြီ..
ဒါနဲ့ ကိုယ်ကလဲ အဲလို Language တွေ Culture တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် research ရှာမယ်ပေါ့.. အစ်မကို အားကိုးရတာလဲ အားနာလှပြီလေ.. ဒါလဲ မဖြစ်သင့်တော့ဘူးထင်တာပေါ့... ဒါနဲ့.. ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေ computer သုံးတဲ့ Lab ကို သွား... အကျအနထိုင်.. ငါက စာလုပ်မှာပေါ့.. သူများတွေလို Lab လာပြီး Game ဆော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့.. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ပြန်မြှောက်လိုက်ပါသေးတယ်.. ပြီးတော့ အင်တာနက်ကိုဖွင့်.. Google ကိုသွား... "Japanese student lifestyle" လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့လင့်ခ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်...
အဲဒိမှာပြဿနာစပါတော့တယ်.... ဘယ်က Porn တွေတက်လာလဲမသိပါဘူး...အင်တာနက်မှာအဲဒါမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ မဗေဒါ သိတောင်မသိပါဘူး.. ဘာတွေမှန်းတောင်သေချာမသိပါဘူး.. လူလဲ ထူပူပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသိပါဘူး.. အင်တာနက် Page ကို လှမ်းပိတ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ.. တစ်ခုပိတ်ရင် နောက်ထပ် ၃ခုလောက်က pop up တွေထပ်တက်လာပါတယ်.. အဲဒါဘာလို့ဖြစ်မှန်းလဲ မဗေဒါမသိခဲ့ပါဘူး... ဘယ်လိုမှပိတ်လို့မရတဲ့အဆုံး.. ကွန်ပြူတာ မော်နီတာကြီးကို လက်နဲ့ပြေးကာပါတော့တယ်... သူများတွေမမြင်အောင် ကိုယ်နဲ့ပါကာပြီး ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်.. ဘေးဘီကိုလဲ ရှက်လဲရှက်.. ဘယ်သူများမြင်သွားသေးလဲဆိုပြီး.. လှည့်ကြည့်ရပါတယ်.. တစ်ယောက်ထဲ ဝုန်းဆိုမတ်တပ်ထရပ်ပြီး.. မော်နီတာကို ပြေးဖတ်တာဆိုတော့.. လူတွေကလှည့်တော့ကြည့်ကျပါတယ်.. နောက်တော့လဲ သူတို့အလုပ်သူတို့ဆက်လုပ်ကြပါတယ်.. မဗေဒါလဲ အရူးလို့ထင်ချင်ထင်.. အဲဒိမော်နီတာပေါ်ကဟာတွေကို မမြင်ဖို့အရေးကြီးတော့.. မော်နီတာကြီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထားပါတယ်.. ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲမသိပါဘူး.. ဘေးကလူတွေမြင်ရင် ဒီကောင်မလေးကျောင်းလာပြီး ဘာတွေကြည့်နေလဲလို့ထင်မှာပေါ့... လက်တွေလဲ တုန် ဒူးတွေလဲတုန်.. ဇောချွေးတွေတောင်ပြန်ပါတယ်... နောက်ဆုံးအောက်က ပါဝါကို ခြေထောက်နဲ့ လှမ်းပိတ်လိုက်ရပါတယ်.. ပြီးတော့ မဗေဒါလဲ ကိုယ့်လွယ်အိတ်ယူပြီး lab ထဲကပြေးပါတော့တယ်.. ပထမဆုံး အင်တာနက်မှာ research ရှာပြီး တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့ကြုံက ခါးသီးလွန်းလို့.. မဗေဒါ အင်တာနက်ကို အဲဒီ တစ် semester လုံး မထိရဲတော့ပါဘူး.. နောက်ဆုံး ကျွန်မအစ်မကိုပဲ အကူအညီတောင်းပြီ အဲဒိပရောဂျက်ကို ပြီးအောင်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်...
အဲလိုဖြစ်ပြီး.. ၁ပတ်လောက် ကျောင်းကများ warning letter လာမလား.. ကျောင်းများအထုတ်ခံရတော့မလား.. ခေါ်မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲ.. ငါ့ကို ယုံပါ့မလား.. ဆိုပြီး.. မဆိုင်တာတွေကို အကြောက်ပိုခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးကို လဲ ခုပြန်စဉ်းစားတိုင်း အားမလိုအားမရဖြစ်ရပါတော့တယ်... အော်.. နည်းပညာမှာ ခေတ်နောက်ကျခဲ့တော့ အပိုတွေ စိတ်ဖိစီးရပြီပေါ့.. တွေးမိတိုင်း အပြစ်တင်ချင်တာ ၁ဦးပဲရှိပါတယ်.. ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို နည်းပညာနောက်ကျပြီး.. မျက်စိပိတ်နားပိတ်လုပ်ထားတဲ့သူပေါ့...
Posted by mabaydar at 6:42 AM 10 comments :
မဗေဒါလို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ လူတွေက... ရေခပ်မဆင်းဘူးလား.... ဘဲအုပ်ကတစ်ရာနှစ်ရာနဲ့ မဗေဒါတစ်ပင်ထဲလား ဆိုပြီး.. ရီကျဲကျဲပြောရင် ကျွန်မစိတ်ထဲ သိပ်ဘဝင်မကျလှပါဘူး..
ခင်လို့မင်လို့ တစ်ခါတစ်ရံ စတာနောက်တာကို မဗေဒါ စိတ်ထဲမထားပေမဲ့... တချို့က မဗေဒါနဲ့ စတွေ့လို့ နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ စပ်ဖြီးဖြီးလေသံနဲ့ အဲလိုပြောတာကို သဘောမကျလှတာပါ...
မဗေဒါ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ရွေးထားတဲ့ ဒီနာမည်လေးကို ပျက်ရယ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးကို မဗေဒါ မလိုလားပါဘူး..
ဒီတော့ မဗေဒါနာမည်ကို ဘာကြောင့်ရွေးတယ် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်မျိုးနဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတာလေးကို ပြောပြသင့်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်..
ပထမဆုံး ပြောပြချင်တာကတော့ ကျွန်မရွေးထားတဲ့ မဗေဒါဆိုတာ ရေဗူးပေါက်သေးသေးလေးနဲ့ ရေခပ်ဆင်းတဲ့ ခပ်တုံးတုံး မဘေဒါကိုရည်ညွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး...
"ဘဲအုပ်ကတစ်ရာနှစ်ရာ မဗေဒါကတစ်ပင်တည်း" ဆိုတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရေးတဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာထဲက မဗေဒါပါ...
ဒါကြောင့် "မဗေဒါရေ တစ်ပင်ထဲလား..ဘဲအုပ်တစ်ရာနှစ်ရာနဲ့လား" လို့မေးရင်.. "ဟုတ်ပါတယ်"လို့ပဲ ပြန်ပြောမှာပါ...
ဒီတော့ တချို့လူတွေက ဘဲအုပ်တစ်ရာနှစ်ရာဆိုပြီး တစ်လွဲတွေးကြပြန်ပါတယ်...
သူတို့တွေးတဲ့ ဘဲက ဘမ်းစကား.. ရည်းစားဆိုတာမျိုးကိုပါ.. လေသံတွေကို နားထောင်ပြီးခံစားရတာကိုပြောတာပါ..
(လူကို ထိကပါးရိကပါး စချင်နောက်ချင်တဲ့လေသံမျိုးနဲ့ပြောတာကို မခံချင်တာပါ)
ဒီတော့ မဗေဒါရဲ့ ဘဲအုပ်ဆိုတာဘာကို ဆိုလိုတာလဲ နားလည်သည်ပဲ ဖြစ်စေ..
နားမလည်သေးဘူးပဲ ဖြစ်စေ.. မဗေဒါကတော့ ရှင်းပြဖို့တာဝန်ရှိလာပါပြီ...
မရှင်းပြခင် ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာလေးကို အရင် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်...
ရွှံ့ညွန်တွေနဲ့ တူတဲ့ ဘဝအမောတွေကြား အုန်းလက်တွေ၊ ဒီလှိုင်းတွေ၊ ဘဲကောင်တွေနဲ့တူတဲ့ လောကဓံတရားတွေရဲ့ အထုအထောင်းတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး လုံ့လဝီရိယဇွဲနဲ့ အလျော့မပေးပဲ ဘဝကိုအောင်မြင်အောင် အံကိုခဲပြီး ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း...
ဒီကဗျာလေးကို မဗေဒါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတော့ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဌေးက သူမကိုသစ္စာဖောက်ကာ ငွေနောက်လိုက်ပြီး ချမ်းသာတဲ့မိန်းမနဲ့လက်ထက်သွားတဲ့ သူမချစ်သူ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းကို ပေးတဲ့စာအဖြစ်နဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်..
ဒေါ်ကြည်ကြည်ဌေးရဲ့သီချင်းဆိုတဲ့ ဟန်တွေမာန်တွေကိုကြည့်ပြီး ဒီကဗျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မဗေဒါခံစားရတာနောက်တစ်ခုက ပြိုင်ဘက်ကို စိန်ခေါ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးပါ..
အားမတန်လို့ အလျော့ပေးရပင်မဲ့ သူမဘဝအတွက် ကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲ လက်မလျော့ပဲဆက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
မခံချင်စိတ်.. ခပ်ရွဲ့ရွဲ့နဲ့ လောကမှာ ထင်ထားတာတွေဖြစ်မလာလဲ .. ဘဝတိုက်ပွဲကို ဘယ်သူမှအားမကိုးပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ အားမာန်အပြည့်နဲ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း..
"အံကိုခဲ" ဆိုတဲ့စကားလုံးက သူမဘဝအမော အတိုက်အခိုက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပြီး...
"ပန်းပန်လျက်ပဲ" ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးက သူမအရှုံးမပေး ဂရုမစိုက်ပဲ အေးအေးဆေးဆေးကျော်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ခံစာချက်လေးကိုပေးပါတယ်...
ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးမှာ အဲဒိနေရာလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ..
မဗေဒါစိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်နေချိန်တွေမှာ အဲဒိကဗျာလေးကို သတိရလိုက်ရင်.. ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ ခွန်အားပေးသလိုခံစားလို့..
ဒီနာမည်လေးကို Nick name အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးခဲ့တာပါ..
မဗေဒါမှာ အလကားနေအားငယ်တတ်.. စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်..
အဲဒိလိုခံစားရချိန်တွေမှာ လောကကြီးကို အရှုံးပေးချင်စိတ်.. တခါတလေ အသက်တောင်ဆက်မရှင်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်..
ဘဝကို ဆက်တိုက်ချင်စိတ်မရှိတော့တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ...
အဲဒိနာမည်လေးကိုကြားတာနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးကို သတိပေးလိုက်သလိုမျိုးမို့ ကြိုးစားချင်စိတ် ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ အားမာန်အပြည့်ပေးလို့..
ဒီနာမည်လေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးပေးခဲ့တာပါ..
ဘဝကို အံခဲပြီး ကျော်ဖြတ်တယ်ဆိုမှ.. Bill Gate ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်း သွားသတိရမိလို့ဝေငှချင်ပါသေးတယ်..
သင်လူဆင်းရဲ လူမွဲဘဝဖြင့် မွေးဖွားလာခြင်းသည် သင်ညံ့၍မဟုတ်...
သင်လူဆင်းရဲ လူမွဲဘဝဖြင့် သေဆုံးသွားလျှင်သာ သင်ညံ့၍ဖြစ်သည်.. ဆိုတဲ့အတိုင်း..
လောက အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခိုက်တွေကြားမှာ အံခဲပြီး အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ရမည်ဆိုတဲ့ အကြောင်း...
ကဲ.. ဒီလောက်ဆို မဗေဒါရဲ့ နာမည်အဓိပ္ပါယ်လေးကို သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်...
နောင်တစ်ချိန် မဗေဒါဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့ ပျက်ရယ်ပြုတဲ့ သူကို ဒီပိုစ့်လင့်ပေးပြီးသာ ဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့မယ်..
ဒါမှ နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့.. ထိုသူသည် မဗေဒါစကားမပြောအပ်သော ဥပေက္ခာပြုစာရင်းတွင် ရာသက်ပန် ရက်ဂျစ်စတာလုပ်ပြီးသာပင်တည်း..
အားလုံးလဲ ဘဝခရီးလမ်း အတိုက်အခိုက်တွေကြားမှ အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်ကြပါစေ...
Posted by mabaydar at 6:29 PM 8 comments :
Labels: ကဗျာ , ဗေဒါ့အကြောင်း
Posted by mabaydar at 1:13 AM9comments :
ပြီးခဲ့တဲ့လ မဗေဒါ့အိမ်မှာ အလှူလုပ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေရယ် အစ်မတွေရယ်နဲ့ ကစားဖြစ်တဲ့ ကစားနည်းလေးပါ..
အစ်မရဲ့ သူငယ်ချင်း ထွင်ထားတဲ့ ကစားနည်းလေးပါ...
ဒီလူတွေစုမိပြီဆိုရင် လောကကြီးကို မေ့ပြီး ကစားကြတော့တာပါပဲ.. ကလေးစိတ်မကုန်သေးဘူးပဲပြောပြော..
မဗေဒါမွေးနေ့တုန်းကလဲ ရည်းစား(မှတ်ချက် ယခုမရှိတော့.. ဟီး..) ကြောင့်စိတ်ညစ်ရမဲ့အစား..
မဗေဒါမိသားစုနဲ့ အဲဒိသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ စုပြီး East Coast Beach မှာ မုန့်တွေထည့် လူကြီးတွေအိပ်ဖို့ ယာယီတဲထိုးပေးပြီး..
ကျွန်မတို့တတွေ ညလုံးပေါက် ခုန်ပေါက်ကစားနေခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်မမွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ခဲ့ရပါတယ်..
မဗေဒါမွေးနေ့မှာ suprise လိုချင်တယ်ဆိုပြီး နှစ်တိုင်းမရခဲ့ပါဘူး.. ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ အိမ်မှာချက်ကျွေးပြီး ဖိတ်ခဲ့ရတာချည့်ပါပဲ..
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့ စိတ်ကလဲ ညစ်နေခဲ့တာနဲ့.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပေပေတေတေမွေးနေ့ကို ကျော်ဖြတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားကာမှ...
မထင်မှတ်ပဲ အစ်မတွေဆီက မွေးနေ့ကိတ်နဲ့ ညလုံးပေါက် ကစားမဲ့ အစီအစဉ်ကို ဖြစ်မြောက်သွားတော့ တော်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်..
ညီအစ်မတွေကတော့ ဒီလိုပါပဲ.. ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပါပဲ..
ကဲ.. ဒါတွေထားပါတော့.. ခုပြောချင်တာက ကစားနည်းအကြောင်း.. ဒီကစားနည်းလေးကို ၆ရက်နေ့က ဘလော့ဂါဆုံပွဲမှာ
မဗေဒါ ဝေငှခဲ့ပါသေးတယ်.. အဲဒိတုန်းက မိုးကသဲကြီးမဲကြီးနဲ့ မှောင်နက်မဲမဲဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း..
လူများတော့ မှောင်ထဲမှာ ဘယ်သူ့ကို ပစ်လိုက်လဲ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရတော့.. ကစားနည်းလေးက ပျော်သင့်သလောက်မပျော်ခဲ့ရပါဘူး..
ခု အောက်က ဗွီဒီယို လေးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုကစားရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်မပေါက်.. ကွန်မန့်မှာ ဖြေသွားကြပါအုံး...
စာဖတ်သူတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံရင်လဲ စမ်းကြည့်ကြပေါ့နော်... ပျော်စရာကောင်းမှာပါ...
Posted by mabaydar at 4:32 AM3comments :
တစ်ခါမှနာမည်တပ်ပြီး Tag တာ မခံရဖူးဘူး.. ဒီတစ်ခါတော့ zeRoTraSh Tag တာ ရော.. ဟိုကောင် ဘိုဘို(Emotion of mind/Goat) နားပူနားဆာလာလာလုပ်နေတာရော ကြောင့် မြန်မြန်ရေးမှ နားအေးတော့မှာမို့.(၂ရက်လဲကျော်ပြီဆိုတော့) ရေးလိုက်ပါပြီ...
ကိုယ့်နာမည် --- မဗေဒါ
ကိုယ့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် --- မဗေဒါ.. ဗေဒါမ... ဗေဒါ
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ် --- အိမ်မှာ
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် --- အိပ်နေတဲ့အချိန်တော့မဆက်နဲ့.. အပေါက်ဆိုးတယ်နော်..
အရောင်ဆိုရင် --- အစိမ်း... အနက်... အဖြူ
အ၀တ်အစားဆိုရင် --- လိုက်မယ်ထင်တာ အကုန်ဝတ်တယ်
အစားအစာဆိုရင် --- မြန်မာထမင်း ဟင်း (ငပိမပါ)
ပစ္စည်းဆိုရင် --- လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်ယူတယ်
သီချင်းဆိုရင် --- အခြေအနေ အချိန်အခါနဲ့ မဗေဒါရဲ့ ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကြိုက်တယ်.. များသောအားဖြင့် ရော့ခ်...
စာရေးဆရာ --- စာဖတ်ပျင်းပါတယ်ဆို... အစအဆုံးဖတ်ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာကတော့ ဖေမြင့်
စာအုပ် --- ကာတွန်း၊ စုံထောက်ဝတ္တု၊ နှလုံးသားအဟာရ...
Life style --- ပျော်စရာကောင်းပြီး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ မိသားစုရှိတယ်...
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ --- အရင်ကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲ.. ခုတော့ ရုပ်ရှင် ဖန်တီးတာပါ ဝါသနာပါလာပြီ...
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် --- အလကားရတဲ့လက်ဆောင်တောင် အလိုချင်ဆုံး မလိုချင်ဆုံးရှိသေးလား...
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက --- အဖေ၊ အမေ
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက --- ဗုဒ္ဓ
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက --- ဝေးနေနေ နီးနေနေ သူတို့အကြောင်းစဉ်းစားမိရင် အထီးကျန်မဆန်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့သူ.. လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘက်ကရပ်တည်ပေးသူ...
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက - - - အမ (အကြီးဆုံး ထင်တာပဲ)
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက --- သစ္စာမရှိတဲ့သူ... တာဝန်မယူတတ်တဲ့သူ.. ကတိဖြတ်တဲ့သူ.. ချိန်းပြီးနောက်ကျတတ်တဲ့သူ... နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူ...
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် --- ပေါင်ချိန်စက်ပေါ်တက်တဲ့အချိန်
အကြောက်ဆုံးအချိန် --- ဖေဖေ နဲ့ မေမေ မရှိတော့မဲ့ အချိန်
အပျော်ဆုံးအချိန် --- UFL တက်တုန်းက အချိန်...
အမှတ်တရနေ့ --- ပျော်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေတိုင်းကို အမှတ်ရချင်တယ်.. တချို့နေ့တွေကျတော့လဲ မှတ်မထားချင်ပေမဲ့ နေ့စွဲကအစမှတ်မိနေသေးတယ်...
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု --- ဆုတောင်းလိုက်တိုင်း ပြည့်ရပါလို၏
အချစ်ဆိုတာ --- နီးစပ်မှု၊ ပူလောင်မှု၊
အမုန်းဆိုတာ --- တစ်ခါမှတော့ လူတစ်ယောက်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းမမုန်းဖူးဘူး.. မဗေဒါအတွက်တော့ အမုန်းဆိုတာ ဥပက္ခာပဲ...
အလွမ်းဆိုတာ --- ကိုယ့်ကိုကိုယ်သနားတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ရာကို မှန်းပြီးစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း
သံယောဇဉ်ဆိုတာ --- အေးချမ်းတယ်.. အချစ်ထက်ပို ခိုင်မြဲတယ်
ဘ၀ဆိုတာ --- ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း ဆက်လျှောက်နေရအုံးမဲ့ လမ်း...
သူငယ်ချင်းဆိုတာ --- ရန်ဖြစ်ပြီးလဲ ကြာကြာစိတ်ဆိုးလို့မရဘူး.. သူတို့နဲ့နေရင် ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး.. အရှိအရှိတိုင်းဆက်ဆံလို့ရနေတာ... ပါးစပ်နဲ့မပြောပေမဲ့ ကိုယ့်အပေါ်အမြဲနားလည်မှုရှိနေတာ... စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်ကိုယ့်အနားမှာ သူတို့မရှိပေမဲ့ သူတို့အကြောင်း စဉ်းစားမိလိုက်တာနဲ့ အားရှိစေတဲ့သူ... ချစ်သူဆိုတာ --- ဘဝမှာ အမြဲဟန်ဆောင်လိမ်ညာပြီး ဆက်ဆံနေရမဲ့လူ... (အရှိအရှိအတိုင်းဆက်ဆံခဲ့လို့.. အားလုံးထက်သာအောင် ဦးစားပေးခဲ့လို့.. အလိမ်ခံခဲ့ရတယ်)
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ် --- စကားပြောရင့်တယ်လို့.. (တမင်လုပ်ခြင်းမဟုတ်.. အကျင့်ဖြစ်နေခြင်းသား)
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က --- လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးနေတာ... မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာ...
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း --- မဗေဒါဘလော့ကို နေ့တိုင်းလာလည်နော်... နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်.. ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် လေးလေးစားစားကြည့်ကြပါ.. စိတ်မပါရင် မကြည့်နဲ့...
ကဲ မဗေဒါလဲ ထပ် tag လိုက်မယ်နော်.... တော်တော်များများက ရေးပြီးနေကြပြီဆိုတော့ tag ရမဲ့လူတောင်သိပ်မကျန်တော့ဘူး.. အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ ဘော်ဘော်ဘလော့ဂါလေးတွေကိုပါ tag လိုက်မယ်.. စိတ်ရှိရင်လဲ ရေးပေးကြ.......... စိတ်မရှိရင်လဲ နွားမွေးပြီးရေးပေးကြကုန်လော့....
၃) အိပ်မက်ဒိုင်ယာရီက ပိုင်
Posted by mabaydar at 1:12 AM7comments :
မဗေဒါမှာ ခုတလော ရေးစရာတွေများပါတယ်.. ကြွားစရာလဲရှိတယ်.. ရောင်းစရာလဲရှိတယ်... ပြစရာတွေလဲရှိတယ်...
ဒါပေမဲ့တစ်ခုမှကို အလုပ်မဖြစ်ဘူး... အိမ်မှာအင်တာနက်မရသေးလို့.. ဟိုနေ့က အိုင်တီရှိူးမှာထဲက အင်တာနက်လျှောက်လာတာ..
ခုထိမရသေးဘူး.. ၁၁ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့မှရမယ်တဲ့.. ကဲ.. ဒီလောက်ကြာသင့်သလားပြော... ဟွန်း...
အလုပ်မှာရေးလို့ရပေမဲ့.. မဗေဒါက ဓာတ်ပုံလေးတွေပါထည့်ချင်တော့.. မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. နောက်မှကြွားတော့မယ်.. ဟဲ. ဟဲ..
အင်တာနက်မရှိတာ.. အိမ်မှာ ဘယ်ဟောင်ဟောင်နဲ့ ယောင်ချာချာအရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီ..
မနေ့ကတော့... ဘလော့ဂါ တွေ့ဆုံပွဲလေးမှာတော့ မဗေဒါက ဝါသနာမနေသာတော့... ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတင်ပေးခဲ့လေတော့..
အဲဒါလေး အက်ဒစ်လုပ်ဖို့တော့ ရှိတယ်.. ဘာသီချင်းနောက်ခံထည့်ရမှန်းမသိလို့... အိုင်ဒီယာရှိရင်ပေးကြပါအုံး...
ဘလောဂါ ဆုံပွဲလေးအကြောင်းကိုတော့ ဗွီဒီယိုပြီးမှ တစ်ခါတဲ ရေးပြီးပြောပြတော့မယ်နော်..
ဒီလကုန်လောက်မဗေဒါ ဂျပန်အလည်ခရီးသွားမလို့ရှိတယ်... အဲဒိအကြောင်းလေးလဲရေးချင်သေးတယ်..
ခုတစ်လောလဲ အလုပ်ကနေ့တိုင်းသွားနေရသလို ခံစားနေရတယ်..
အင်တာနက်လေရှိတယ်လေဆိုပြီး မရှိရှိတာလေး ရှာကျန်ပြီး အလုပ်သွားချင်စိတ်မွေးနေရတယ်...
လူလဲ အပျင်းပိုးကပ်နေလားမသိပါဘူး... အလုပ်ကိုလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး... (တိုးတက်အုံးမယ်..)
အဲ.. အလုပ်သာလုပ်ချင်စိတ်မရှိတာ.. တခြားလုပ်ချင်တာတွေကတော့ များမှများ....
အိမ်မှာ အရင်ကရိုက်ထားတဲ့ home video တွေကို သီချင်းလေးတွေနဲ့ အက်ဒစ်လုပ်ချင်တယ်..
ဘလော့ကိုလဲ နေ့တိုင်း update လုပ်ချင်တယ်...
စာအရေးအသားတိုးတက်အောင် စာတွေလဲ ဖတ်ချင်တယ်...
ဆံပင်ပါးပြီး ကျွတ်လွန်းလို့.. hair treatment ၇ခါ package ဝယ်လုပ်တာလဲ မထူးလို့... နောက်တစ်ဆိုင်ပြောင်းလုပ်ချင်တယ်...
အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးး... နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်လိုက်တော့ လုပ်ချင်တာအားလုံးက ပိုက်ဆံရှိမှဖြစ်မယ်...
ပိုက်ဆံရဖို့ အလုပ်ကို ခွေးလို နွားလို ရုန်းလုပ်ရအုံးမယ်...
အိပ်ရေးပျက်လဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ဇွန်ဘီတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေပြီ..
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပင်ပန်းပြီး အိပ်တယ်.. လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်စရာရှိတာတွေဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး..
ညပိုင်းဆိုတော့ နေ့နဲ့ညကိုယ်ဗြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့ ၁ရက်နားတဲ့ ၁နေ့လုံးအိပ်တယ်..
ကိုယ်တကယ်နိုးတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ အားလုံးအိပ်နေတဲ့ ညဘက်..
ကွန်ပြူတာတောင် ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်လို့မရဘူး.. အိပ်နေကြတော့...
ဒီလိုနဲ့ လည်ပတ်နေတာ..... ဟင်း... ဘဝ.. ဘဝ...
ဒါပေမဲ့ မဗေဒါ စိတ်ညစ်နေတယ်.. စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်..
ခုလို ညည်းလိုက်ရတာ.. စိတ်ထဲကို ပေ့ါသွားတာပဲ.. ပြောတော့ဘူး..
Posted by mabaydar at 6:13 AM7comments :
MBS(Myanmar Blogger Society) မှာ စကာင်္ပူဘလော့ဂါတွေ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မမီ(မယ်လိုဒီမောင်)က တော့ပစ်အသစ်ဖွင့်ပြီး ဆွေးနွေးရာမှာ
မဗေဒါက East coast မှာ BBQ pit ငှားပြီးလုပ်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်လောက်က အကြံပေးခဲ့ပါတယ်.. အဲ ဒိနောက်ပိုင်း မဗေဒါအိမ်မှာ အင်တာနက်ခေတ္တ ပြတ်တောက်နေပါတယ်...
အလုပ်ကနေ အင်တာနက်သုံးလို့ရလို့ ဘလော့ကို update လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့... MBS website ကိုတော့ အလုပ်ကနေကြည့်လို့မရခဲ့ပါဘူး.. ကျမအလုပ်က ပိတ်ထားပါတယ်...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ရက်လောက်ကမှ ဘိုဘို(Emotion of Mind)နဲ့ အွန်လိုင်းတွေ့တော့မှ မဗေဒါနဲ့ သူ့ကို East coast မှာ BBQ pit ငှားဖို့ တာဝန်ပေးထားမှန်းသိရပါတယ်..
အဲဒိနေ့ထိ မဗေဒါလဲ သေသေချာချာမသိရသေးတာက တစ်ကြောင်း... ဘိုဘိုနဲ့လဲ နောက်ရက်မှတိုင်ပင်ပြီး booking တင်မယ်ပြောဖြစ်တာနဲ့ ..
အဲဒိနေ့ကမတင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. အဲဒိနေ့က အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်တော့ East coast BBQ pit ၃ခုကျန်ပါသေးတယ်..
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ နောက်ရက်မဗေဒါက အလုပ်ပိတ်ပါတယ်.. အလုပ်ပိတ်တော့ အင်တာနက်လဲသုံးလို့မရခဲ့ပါဘူး...
နောက် တစ်ရက်ကျော်ကျတော့မှ မမီကလဲ မဗေဒါကို ဖုန်းဆက်ပြီး သေချာကြောင်းပြောပါတယ်.. ဘိုဘိုကလဲ ပြောပါတယ်..
မဗေဒါကလဲ အလုပ်က ညတာဝန်ဆိုတော့ အင်တာနက်သုံးပြီး နေရာငှားဖို့က ညမှလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့...
အလုပ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ book ဖို့ကြည့်လိုက်တော့... ဟိုရက်က East coast မှာတွေ့လိုက်တဲ့ BBQ pit တွေမကျန်တော့ပါဘူး...
အဲဒိအချိန် MBS မှာ နေရာကို East Coast မှာလို့ ကြေငြာပြီးဖြစ်နေပါပြီ...
ဒါနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး နေရာကို East coast Beach အစား Pasir Ris Beach ကိုပြောင်းလဲ တင်လိုက်ပါတယ်...
နေရာအပြောင်းအလဲ အတွက် မဗေဒါကိုယ်တိုင် အဆင်မပြေမှုများကို ရှင်းပြချင်ပေမဲ့ MBS ဝင်လို့မရတဲ့အတွက်
အောက်မှာ ပြောင်းသွားတဲ့ နေရာကိုရေးထားပါတယ်.. အသေးစိတ်ကိုတော့ MBS SG blogger Group Forum မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်...
လိုက်ချင်သေးသူများရှိလျှင် မမီသို့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း...
နေရာ.... Pasir Ris Beach, Area 1, Pit no. 8
စုရပ်......Pasir Ris Bus Interchange (near bus 403)
အချိန်.... Pls refer to MBS forum (i think should be around 4:30pm)
Bus no. ...... 403
Posted by mabaydar at 10:57 PM6comments :